सुरुमै थाहा पाए, उपचार हुन्छ ब्रेन ट्युमरको । यस्ता हुन्छन् लक्षणहरु, जानी राखौँ - ज्ञानविज्ञान
सुरुमै थाहा पाए, उपचार हुन्छ ब्रेन ट्युमरको । यस्ता हुन्छन् लक्षणहरु, जानी राखौँ
ब्रेन भनेको मानव मस्तिष्क हो । साथै ट्युमर भनेको अंगमा अनावश्यक मासु पलाउनु हो । सामान्य भाषामा भन्दा मस्तिष्कमा अनावश्यक मासुको डल्लो पलाउनुलाई नै ब्रेन ट्युमर भनिन्छ । ब्रेन ट्युमरलाई हाम्रो समाजमा निकै भयावह रोगमा रुपमा लिइन्छ । यो मस्तिष्कमा लाग्ने रोग भएकाले पनि यसलाई आवश्यक्ता भन्दा भयावह रोगका रुपमा लिइएको हो ।
ब्रेन ट्यूमर एक गम्भीर समस्या हो । समयमै रोग पत्ता लागेर उपचार भएको खण्डमा यो रोग निको हुन्छ । उपचारमा भएको थोरै मात्र ढिलाइले ज्यानसमेत जानसक्छ । विशेषगरी, ब्रेन ट्युमर भएमा मस्तिष्कको एउटा कोषिका वा अन्य थुप्रै कोषिका असामान्य रुपले बढ्न थाल्छन्, जसका कारण अन्य कोषिका क्षतिग्रस्त हुन थाल्छन् ।
कुनै ब्रेन ट्युमर वंशाणुगत कारणले हुनसक्छ भने कुनै रेडियसनमा एक्सपोज हुनाले पनि हुनसक्छ । सुरुवाती अवस्थामै यसको पहिचान भएको खण्डमा यो रोग पूर्णतया निको पार्न सकिने भएकाले यसको लक्षणबारे गहिराइमा बुझ्न आवश्यक छ ।
१. टाउको दुख्नु
टाउको दुख्नु ब्रेन ट्युमरको सबैभन्दा पहिला तथा सामान्य लक्षण हो । ब्रेन ट्युमर भएमा सुरु-सुरुमा टाउको दुख्ने समस्या बिहानको समयमा बढी हुने गर्छ र पछि लगातार हुने गर्छ । यस्तो दुखाइ कयौंपटक यति धेरै हुन्छ कि मानिसले आफ्नो मानसिक सन्तुलन नै गमाउन सक्छ । यदि तपाईलाई पनि लगातार टाउको दुख्छ भने एकपटक अवश्य चिकित्सकलाई जचाउनुस् ।
२. उल्टी आउनु तथा खान मन नलाग्नु
ब्रेन ट्युमरको अर्को लक्षण भनेको वान्ता हुनु हो । कहिलेकाहीँ टाउको दुख्नाले दिनभर केही खान मन लाग्दैन । टाउको दुख्ने समस्या झैं वान्ता हुने समस्या पनि सुरुसुरुमा विहानको समयमा धेरै हुने गर्छ । तर पछिपछि भएपछि यो समस्या बढ्दै जान्छ ।
३. शरीर असन्तुलित हुनु
ब्रेन ट्युमर भएमा अक्सर रिङ्गटा लाग्ने गर्छ । कहिलेकाहीँ धेरै रिङ्गटा लागेमा मानिस ढल्नेसमेत गर्छ । विशेषगरी ट्युमर सेरिबेलममा भएमा यसले शारीरिक सन्तुलनलाई प्रभावित पार्ने गर्छ, जसले गर्दा कयौंपटक हिँड्दा हिँड्दै शरीरको सन्तुलन विग्रेर मानिस ढल्ने गर्छ ।
४. मुर्छा पर्नु
ब्रेन ट्युमरका कारण जब कोषिकाले मस्तिष्कभित्र आफ्ना जालो विछ्याउन थाल्छ वा फैलिन थाल्छ तब यसले वरिपरिका कोषिकालाई समेत प्रभावित पार्ने गर्छ । जसका कारण विरामी बारम्बार मुर्छा पर्ने तथा बेहोश हुने गर्दछ ।
५. हात खुट्टामा ऐठन महसुस हुनु
ट्युमरको कोषिका जब प्याराइटल लोबमा हुन थाल्छ, तब मानिसको हात तथा खुट्टामा अचानक ऐठन हुन सुरु हुन्छ । उसलाई आफ्नो शरीरका सबै अंग निस्कृय हुन थालेको महसुस हुन्छ । यो प्यारालाइसिस हुनु पूर्वको अवस्था हो ।
६. प्यारालाइसिस महसुस हुनु
ब्रेन ट्युमरका कारण कयौंपटक मानिसको शरीरका विभिन्न अंगहरुबाट मस्तिष्कको कन्ट्रोल टुट्ने गर्छ । जसका कारण उसलाई ति अंगको संवेदनशीलता महसुस हुन सक्दैन । विरामीलाई प्यारालासिस वा पक्षघात भएजस्तो महसुस हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा हात तथा खुट्टाले काम गर्न बन्द गर्छ । यो स्थिति त्यतिबेला पैदा हुन्छ, जब मानिसको मस्तिष्कको प्याराइटल लोबमा ट्यूमर हुने गर्छ ।
७. बोल्नमा समस्या
मस्तिष्कले शरीरका हरेक अंगलाई नियन्त्रण गर्दछ । त्यसैले, ट्युमरको कोषिका जुनसुकै कोषिकाको सम्पर्कमा आएपनि त्यसले उक्त कोषिकालाई प्रभावित पार्ने गर्दछ । यसैगरी, जब यी कोषिका ट्यापोरल लोबमा प्रवेश गर्छन्, तब व्यक्तिलाई बोल्नमा समस्या हुन्छ । यही कारण व्यक्तिको आवाज हराउनुका साथै उनीहरुको मुखसमेत बाङ्गनिे गर्छ ।
८. स्वभावमा परिवर्तन
ब्रेन ट्युमरका कारण हाम्रो अंग तथा मानसिक अवस्थामा मात्र नभइ स्वभावसमेत प्रभावित हुने गर्छ । ट्युमर अगाडिको लोबमा पुगेमा त्यसले व्यक्तिको स्वभावमा समेत परिवर्तन ल्याउँछ । व्यक्तिले आफ्नो व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन, जसका कारण उसमा चिडचिडापन तथा उदासी आउने गर्छ ।
९. सुन्नमा कठिनाइ
ब्रेन ट्यूमर जब व्यक्तिको ट्यापोरल लोबमा पुग्दछ, तब यसले बोल्नमा मात्र नभई सुन्नमासमेत समस्या उत्पन्न गराउँछ । कयौंपटक त कानको जाली पनि फाटे झैं महसुस हुन्छ ।
१०. कमजोरी महसुस हुनु
टाउको दुख्नुका साथै कमजोरी महसुस हुनथाल्छ । जब मस्तिष्कमा ट्युमर पलाउन थाल्छ, तब वरिपरिका कोषिका प्रभावित हुन थाल्छन् । जसका कारण टाउको दुख्नुका साथै सम्पूर्ण शरीर कमजोर भएको महसुस हुन थाल्छ ।
# ब्रेन ट्यूमरको उपचार कसरी गरिन्छ ?
सबैभन्दा पहिला लक्षणको आधारमा सिटी स्क्यान,एमआरआई गरेर ब्रेन ट्युमर भए नभएको एवं कुन ग्रेडको छ यकीन गरिन्छ । ट्यूमरको सही उपचार भनेको शल्यक्रिया नै हो । तर केही ट्युमरको शल्यक्रिया नगरि पनि उपचार सम्भव हुन्छ ।
# ब्रेन ट्यूमरबाट कसरी बच्ने ?
मस्तिष्कका कुनै कोषको अनियन्त्रित वृद्धि भएर मासुको जस्तो डल्लो बन्दा ट्युमर हुने हुँदा यो यही नै सावधानी अपनाउँदा हुदैन् भन्ने हुदैन् । तर स्वस्थ वातवरणमा बस्ने ,विभिन्न प्रकारका रेडियसन,विकिरणहरुबाट जोगीने, मद्यपान,धुम्रपान नगर्नाले केही हदसम्म बच्न सकिन्छ । कुनै पनि लक्षण देखिएमा वा शंका लागेमा तुरन्त न्युरोलोजिष्ट (नशारोग विशेषज्ञ)कोमा परीक्षण गराउनुपर्छ ।
साबधान, बढी मोबाइल प्रयोगले ब्रेन ट्युमर हुनसक्छ ।
बच्चामा ब्रेन ट्युमर के हो ? चिकित्सा विज्ञानले अहिलेसम्म यसको ठ्याक्कै उत्तर खोज्न सकेको छैन । हालै भएको एउटा अनुसन्धानले बच्चाको कान नजिकैको मस्तिष्कमा क्यान्सरयुक्त ट्युमरको समस्या बढिरहेको छ । उक्त अनुसन्धानले अत्यधिक मोबाइल प्रयोगका कारण यस्तो समस्या देखिएको बताएको छ । चेन्नईका अपोलो प्रोटोन सेन्टरका चिकित्सक डा. राकेश जलालीले गरेको अनुसन्धानमा यस्तो देखिएको हो ।
डा. राकेशले बच्चालाई लामो समय मोबाइल प्रयोग गर्न नदिनका लागि सुझाब दिएका छन् । अहिलेको शोधले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ ।
उक्त अनुसन्धानले लामो समयसम्म मोबाइल प्रयोग गर्दा मस्तिष्कको क्यान्सर हुने सम्भावनालाई बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ । यसरी लामो समय मोबाइलको प्रयोग गर्दा बच्चामा काननजिकै ट्युमरको खतरा बढेर जान्छ ।
६ देखि सात घन्टासम्म लगातार मोबाइलमा कुरा गर्दा ट्युमर हुन सक्छ । उनले भनेका छन्, ‘मोबाइलमा नेटवर्क कमजोर हुने समय मानिसले कानमा जोडसँग टस्साएर कुरा गर्छन् । जसलाई राम्रो मानिँदैन । यस्तो अवस्थामा रेडिएसन एक्सपोजरको खतरा बढ्दै जान्छ ।’
चिसो कपाल भएको अवस्थामा मोबाइलमा कुरा गर्नु हुँदैन ।
ब्रेन ट्युमरबाट वयस्क मानिस बढी पीडित हुन्छन् । बच्चामा हुने क्यान्सरको ब्रेन ट्युमर दोस्रो ठूलो कारण हो । तर, बच्चामा हुने ब्रेन ट्युमरको भने राम्रोसँग उपचार हुन्छ ।
धेरै मानिसमा ब्रेन ट्युमरबारे चेतनाको अभाव छ । यस्तो समस्या सुरुवाती चरणमा थाहा भएमा भने राम्रोसँग उपचार गर्न सकिन्छ । क्यान्सरपीडितमध्येका करिब दुई प्रतिशत मानिस ब्रेन ट्युमरबाट ग्रसित हुन्छन् । ब्रेन ट्युमरले बच्चाको आँखा देख्ने क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ ।
के हो मस्तिष्कघात ?
डा. वसन्त पन्तका अनुसार मस्तिष्कघात हुँदा ५० प्रतिशत मानिसको मृत्यु तुरून्तै हुन्छ भने ५० प्रतिशत अस्पताल आइपुग्छन् । अस्पताल आइपुगेकामध्ये ५० प्रतिशतलाई बचाउन सकिन्छ । ‘यो संख्या कूल बे्रन एट्याक हुने सख्याको २५ प्रतिशत हो,’ उनले भने, ‘बाँच्न सफल भएकाहरूको पनि ५० प्रतिशत कुनै भाग वा पाटो प्यारालाइसिस (पक्षघात) हुन्छ । ब्रेन एट्याक क्यान्सर र मुटुरोगपछि मृत्युको तेस्रो ठूलो कारण हो ।’ उनका अनुसार गरीव देशमा बे्रन एट्याकको प्रमुख कारण अस्वथकर जीवनशैली नै हो । ब्लडप्रेसर भएका ३० देखि ३५ प्रतिशतलाई ब्रेन एट्याक हुनसक्छ ।
मस्तिष्कमा रक्त प्रवाहमा अवरोध भएपछि उत्पन्न हुने समस्या नै मस्तिष्कघात हो । मस्तिष्कका कोशिकाहरूमा रगतको माध्यमबाट अक्सिजन पुग्ने गर्छ । तिनै अक्सिजनका माध्यमले नै मस्तिष्कले काम गर्छ । तर, रक्त प्रवाहमा अवरोध हुँदा त्यो प्रक्रिया रोकिन्छ, दिमागका कोशिकाहरू मर्छन् र ब्रेन एट्याक हुन्छ । मस्तिष्कलाई रगत आपूर्ति गर्ने नशाहरु फुटेर वा थुनिएर रगत प्रवाह रोकिन पुग्छ । रगत प्रवाह रोकिनेबित्तिकै मस्तिष्कका कोशिकाहरुमा अक्सिजन प्रवाह हुन सक्दैन र मस्तिष्कका तन्तुहरु मर्न थाल्छ । समयमै उपचार गरिएन भने बिरामीको मृत्यु समेत हुने गर्छ ।
चिकित्सकीय हिसाबमा मस्तिष्कघातलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो रगतका नशा बन्द भएर हुने मस्तिष्कघातलाई इन्फाक्सन र दोस्रो रगतका नशा फुटेर हुने ब्रेन ह्यामरेज ।
रगतका नशा बन्द हुँदा हुने मस्तिष्कघात
अधिकांश व्यक्तिहरुमा यो अस्वस्थकर जीवनशैलीका कारण नै निम्तिने समस्या हो । यो समस्या आएका व्यक्ति काम गर्दागर्दै ढल्छ । धूमपान, मोटोपन, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल, मानसिक तनाव, बढी चिल्लो नुनिलो र तारेको खानेकुराको प्रयोग, व्यायाम नगर्नेहरुमा यो रोग लाग्ने सम्भावना अत्यधिक हुने वीर अस्पतालका न्युरो विशेषज्ञ डा. प्रकाश विष्ट बताउँछन् । उनका अनुसार रगतको नशामा चिल्लो पदार्थ तथा बोसो जमेपछि मस्तिष्कसम्म पुग्ने रक्तप्रवाहमा अवरोध हुन्छ र मस्तिष्कघात हुन पुग्छ ।
रगतको नशा फुटेर हुने ह्यामरेज
नशा फुटेर हुने एट्याकको प्रमुख कारण ब्लडप्रेसरको औषधिमा गरिने लापरबाही नै हो । यस्तो समस्या विशेषगरी युवामा देखिने गरेको पाइन्छ । डा. पन्तका अनुसार हृदयघातभन्दा ब्रेन एट्याक झन् बढी खतरनाक समस्या हो । हृदयघातको समयमै अस्पताल पुर्याएर उपचार गर्न सकियो भने मानिस पुरानै अवस्थाको जीवन बाँच्न सक्छ तर बे्रन एट्याकमा शल्यक्रियापछि पनि पुरानै अवस्थामा फर्किन सकिन्न र केही न केही खोट भएको जीवन विताउनु पर्छ । ब्रेन एट्याकमा शरीरको निश्चित पाटो कमजोर रहने सम्भावना रहिरहन्छ । ब्रेन एट्याकले प्यारालाइसिसको सम्भावना समेत बढी हुन्छ । ब्रेन एट्याक भएकाहरुमा मुख बांगो हुने, हातगोडा नचल्ने, आँखा देख्न नसक्ने, बोल्न नसक्ने जस्ता समस्या देखिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार विश्वभर हरेक वर्ष एक करोड ५० लाख मानिस मस्तिष्कघातको सिकार हुन्छन् । जसमध्ये ५० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ भने ५० लाखभन्दा बढी पक्षघातका कारण शरीरको एउटा वा त्योभन्दा बढी भाग चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तथ्यांकअनुसार बाँकी रहेका ५० लाखमध्ये १५ लाखभन्दा बढी उपचारपश्चात सामान्य जीवनमा फर्कन सफल भएका छन् । यस्तै, ३५ लाख हाराहारीका बिरामी भने सामान्य विकलांगताका साथ बाँचिरहेका छन् ।
मस्तिष्कघात जीवनमा अप्रत्याशित रुपमा हुने र तत्कालै ज्यान जान पनि सक्ने समस्या हो । समयमै उपचार पाएकाहरु सामान्य जीवनमा फर्कन सके पनि ढिलो गरी उपचारमा पुग्नेहरुमा शरीरको कुनै भागमा खोट रहने या पक्षघातजस्तो समस्याले सताउने भएकाले अरुको भरमा बाँच्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ ।
सामान्यतया मस्तिष्कघातले एकैपटक मानिसलाई आक्रमण गर्छ । तर, त्यो भन्दा पहिला मानिसलाई केही समय एउटा आँखा देख्न छाड्छ र केही समयपछि फेरि देख्न हुन्छ । त्यसैगरी केही समयका लागि एउटा पाटो नचल्ने हुन्छ र क्रमशः फेरि चल्न थाल्छ । केही समयसम्म यस्तो प्रक्रिया दोहोरिरहन्छ भने त्यो बे्रन एट्याकको स्पष्ट पूर्व संकेत हो । यस्तै अचानक सहनै नसक्ने गरी छुट्टै तरिकाले टाउको दुख्नु, रिंगटा लाग्नु, शारीरिक सन्तुलन बिग्रिएर ढल्नु, शरीरको एक पाटोमा झमझम गर्नु, निदाउनु वा कमजोरी देखापर्नु, होस हराउनु, एकाएक दृष्टि धमिलो हुनु, बोली लटपटिनु वा बोल्न नसक्नु, वान्ता हुनु, बेहोस हुन, प्यारालाइसिस हुनु मस्तिष्कघातका लक्षण हुन् ।
Don't Miss it हामीले आफुमा कसरी सुधार ल्याउने ? जान्रुहाेस्
Up Next अहंकारके के हो ? यसलाई कसरि त्याग्ने ? अनि जीवनमा कसरि अगि बढ्ने ? जीवन उपयाेगी लेख
‘पेटको रोग नभएको ब्यक्ती नेपाली नै होइन’ एउटा ब्यंग्यात्मक भनाइ प्रचलित नै छ नि, यस्तै खाना पच्दैन ? अपचकाे समस्या छ भने कसरी सुधार्ने पाचनयन्त्र
नेपालमा एउटा ब्यंग्यात्मक भनाइ प्रचलित छ – ‘पेटको रोग नभएको ब्यक्ती नेपाली नै होइन’ । वास्तवमा नेपालीलाई सबैभन्दा बढी सताएको…
युरिक एसिड हुनुकाे मुख्य कारण यस्ताे पाे रहेछ, एकचाेटि पढाैँ
जाडो याम सकिएपनि गर्मी बढेको छैन । चिसो मौसममा हाड जोर्नी दुख्छ, खासगरी प्रौड उमेरका व्यक्तिलाई । युरिक एसिडको मात्रा…
3 weeks ago biplov
हङकङले बनायाे काेराेना भाइरसकाे खाेप, पढाैँ खुशीकाे खबर
हङकङका अनुसन्धानकर्ताहरुले कोरोना भाइरसको खो’प आविष्कार गरेको बताएका छन्। यद्यपि यसलाई परीक्षण गर्न केही समय लाग्ने उनीहरुको भनाइ छ ।…
खाना पच्दैन ? कसरी सुधार्ने पाचनयन्त्र
खुट्टा निदाउँने वा झम झम्झम् गर्ने र दुख्ने गर्छ ? यी उपायहरु अपनाउनुहोस् र सजिलै छुटकारा पाउनुहोस्
तपाईँले पक्कैपनि कुनै न कुनै बेला खुट्टा निदाउँने वा झम झम्झम् गर्ने अवस्थाको महसुस गरेको हुनुहुन्छ होला । एकैठाँउमा नचलिकन…
जाडोमा बढी चायाँ पर्नुकाे कारण र यसकाे समाधान जानिराखाै
कपालमा चायाँ पर्नु धेरैलाई देखिने समस्या हो जुन बच्चा, युवा, बृद्ध सबैमा देखापर्छ । टाउकोमा छालाका कोष मर्ने र नयाँ…
हामीले खानेकुरा पकाउँदा त्यसको पोषक तत्व कसरी सुरक्षित राख्ने ? जान्नैपर्ने कुरा
हामी खाना किन खान्छौं ? आम जवाफ हो, ‘भोक मेट्न ।’ यद्यपी खाना त्यही स्रोत हो, जसले हाम्रो शरीरलाई आवश्यक…
आफ्नो समय कहिले आउँछ ? ‍- हेर्नु पर्ने प्रेरक भिडियो
भिडियो पोस्टको अन्तिममा राखिएको छ तर भिडियोमा पुग्नु भन्दा अगाडी त्यो भन्दा माथिको लेख पढ्न अनुरोध गर्दछौँ । जीवनमा सधै…
2 months ago mygyanbigyan
दुध सँग यी कुराहरु खाएमा बिष बराबर हुन्छ, दुध कसरी र कुन कुन बेला पिउने ? जानीराखौ
खानेकुरा कहिले खाने के सँग खाने के सँग नखाने यस्ता कुराहरु पनि बुझ्नु जरुरी छ । अन्यथा खानाबाट अमृतको साटो…
11 months ago Pradeep Karki
तौल सन्तुलनका लागि केहि टिप्स
१. तौल घटाउन आफूले गरेको प्रयासप्रति विश्वास गर्नुपर्छ । सकारात्मक सोचले मात्र आफूलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ । तौल घटाउनका लागि…
नून नहालेको दाल तरकारी खान मुश्किल पर्छ । तर खानाको स्वाद बढाउन बाहेक नुहाउँदा पनि नूनको उपयोग हुन्छ । नुहाउने…
ज्वानोको झोल खानुका यस्ता फाइदाहरु, तौल घटाउनु मन भए खानुहोस्
हाम्रो भान्छामा प्रयोग हुने मसलाको रुपमा ज्वानोलाई लिने गर्दछौ । ज्वानोलाई मसला मात्रै हामी सोचेको हुन्छौ होला तर ज्वानो खानु…
तपाईको मुस्कुराउने बानी छ कि छैन ? छैन भने अब मुस्कान छर्नुस, स्वस्थ रहनुस
एक पटक सम्झनुस त तपाईँ पछिल्लो पटक कहिले मुस्कुराउनुभएको थियो ? सम्झनु भयो ? कन्फ्युज हुनु भयो होला । किनकी…
8 months ago Pradeep Karki
दाँत सेतो र चम्किलो बनाउने घरेलु काइदा, जानिराखाैँ
सामान्यत हामी सौन्दर्यको कुरा गर्दा, स्वास्थ्यको कुरा गर्दा दाँतलाई पाखा लगाउँछौं । अर्थात सौन्दर्य र स्वास्थ्यको कुरामा दाँतलाई भुल्छौं ।…